Abavelisi be-Ultrafiltration-abaThengisi be-China abaFunekayo kunye neFektri
5685/5686 3-Inqanaba eliphantsi kweSink yoNyango lwaManzi oluCwangcisiweyo
Igcina izimbiwa eziluncedo emzimbeni womntu.
Ukulahleka kwenqaku lokucoca iCartridge kunceda ukugcina indawo yokuntywila kwaye kulula ukuyifaka kunye nokutshintsha.
Uyilo oludibeneyo lwesahlulo esinye esimanyanisiweyo sesekethe yamanzi lunokunciphisa umngcipheko wokuvuza, ukubonelela ngesiqinisekiso sokhuseleko xa ufumana amanzi.
I-faucet ye-Smart iyafumaneka ukujonga ngokulula imeko yexesha lokucoca ulwelo kwaye uthathe inqaku lokutshintsha isihluzi.
5210/5211 3-Inqanaba eliphantsi kwesinki Inkqubo yoNyango lwaManzi
I-NSF 42, 53, 401 eqinisekisiwe yokususa ngaphezulu kwe-99.99% yokungcola emanzini ngelixa kugcinwa iiminerali eziluncedo emzimbeni womntu.
Isalathiso sempilo yebhetri siyafumaneka ukukwazisa ngamandla ebhetri.
Inqanaba elinye, amabakala amabini kunye nenqanaba ezintathu zokhetho. Inkqubo inokuza nepompo ngokunjalo.
I-5214 3-Inqanaba eliphantsi kweSinki yoNyango lweNdawo yokuNyanga amanzi
Susa ngaphezulu kwe-99.99% yokungcola emanzini ngelixa ugcina izimbiwa eziluncedo emzimbeni womntu.
Uyilo olungenatanki luziisentimitha ezi-4.72 ububanzi, olunceda ukugcina indawo kwikhawuntara okanye phantsi kwesinki.
Icebo lokucoca ulwelo lokucoca ulwelo nge patent yokumisa amanzi ukuqinisekisa ukusetyenziswa kokhuseleko. Iikhathriji zirhoxisiwe ecaleni, akukho sidingo sokucima ivalve yokungena okanye ukuphakamisa inkqubo, kulula kakhulu ukubuyisela amacebo okucoca.
Iza nepaneli efanelekileyo ukubonisa ubomi benkonzo yefilitha. I-faucet efanelekileyo yokukhokela engenanto isebenza njengesikhumbuzo sexesha elifanelekileyo, akukho sidingo sokugoba ukujonga umatshini phantsi kwesinki.
Inkqubo yokucoca amanzi i-UF inokucoca iilitha ezimbini zamanzi ngomzuzu ukuze ufumane amanzi kwimizuzwana nje emi-6.
Eyona ndlela ibuyileyo yokubuyisela umva kuOsmosis, Inkqubo eQhelekileyo yeNdlu yokuBuyisa iOsmosis, Icebo lokucoca ulwelo lwasekhaya, IsiCoci seCartridge sokuThinta amanzi, Umcoci waManzi kwiNdlu iphela, Izinto ezisetyenziswa kuNyango lwaManzi,